HD ABO OBBO DAWUD IBSA HIDHAA MANAA IRRAA AKKA GADILAKKIFAMAN AMNESTY’n GAAFATE | OROMOTV
Amnastii Intarnaashinaal Hayyuu Dureen Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) Daawud Ibsaa erga Caamsaa 3, 2021 hidhaa mana keessaarra akka jiran hime.
Himanni hanga ammaatti irratti dhiyaates waan hin jirreef mootummaan yoo ragaa gahaa qabaate himata irratti yaa banu ykn hatattamaan haa gadhiisu jechuunis gaafateera.
Jaarmiyaan mirga namoomaaf falmu kun ibsa baaseen, Poolisiin erga Obbo Daawud Ibsaa manatti hidhee, namni biraa gara mooraa isaaniitti akka hin gallee fi akka hin baane dhorkeera jedhe.
”Haalli fayyaa isaanii yaaddessaadha. Wantoota nyaataaf oolaanii fi barbaachisoo tahan fixaniiru taha yookaan ammoo fixuu gahaniiru taha,” jedha ibsi kun.
“Mana jireenyaa Hayyuu Duree paartii mormituu ABO, Obbo Daawud, poolisiin gaafa Caamsaa 3, 2021 seeraan ala sakkatta’uun meeshaalee elektirooniksii fudhate,” jedha ibsichi.
Waa’ee ibsa kana irratti BBC’n kan dubbise Amnastii Intarnaashinaalitti, qorataa mirga namoomaa Gaanfa Afrikaa kan ta’e Fissahaa Takilee, Daawud Ibsaa A.L.I Bitootessarraa eegalee mana keessatti to’atamanii akka jiran hime.
“Mana jireenyaa Obbo Daawud magaalaa Finfinneetti argamu namootni galuu hin danda’an. Ebla 3, 2021, qaamoleen nageenyaa mana isaanii dhaqanii meeshaalee elektirooniksii mana keessa turan kompiitaroota, moobaayiloota hunda erga fudhatanii booda eenyuyyuu akka hin baaneefi hin galle godhanii akka jiran qaamolee garaagaraarraa mirkaneeffanneerra” jedhe Fissahaan.
”Amma haalli keessa jiran yaachisaa waan ta’eef maaliin akka shakkamaniis, maaliif tarkaanfiin akkasii akka fudhatames wanti ibsame waan hin jirreef, mootummaan yakkaan isaan shakkeera yoo ta’e hatattamaan akka himata irratti banu, yoo ta’uu baatemmoo hidhaa mana keessaa kana akka irraa dhaabu gochuufi ‘hubachiisa hatattamaa’ kana kan baafneef,” jedhe.
Amnastii Intarnaashinaal ibsa baase kana gara Ministeera Nagaatti akeeke. Kun maaliif kan jedhuuf Obbo Fissahaan akkas jedhan.
”Caaseffama mootummaa amma jiruun Poolisiinis ta’e qaamoleen nageenyaa hundi Ministeera Nagaa jala jiru. Kanaaf, qaamoleen nageenyaa mana Daawud sakatta’aniifi mana keessatti akka to’ataman godhan gaafatamni isaanii Ministeera Nagaaf waan ta’eef ibsa kana gara isaaniitti akeekne.”
Ibsichi mootummaan tarkaanfii hatattamaa fudhachuun akka hidhaa manaa keessaa irraa dhaabuuf akka barreesan hime.
Haala Obbo Daawud keessa jiran akkamiin adda baasan?
Obbo Fissahaan haala hidhaan manaa kun itti raawwateefi amma itti jiran namoota odeeffannoo qaban garagaraarraa mirkaneeffachuu himan.
”Manni isaanii yeroo sakatta’amu namoota achi turan gaafanneerra. Aanga’oota paartii isaanii gaafanneerra.
Isaan argachuu akka hin dandeenye, bilbilas akka hin qabne, mana isanii keessa gargaartuu daa’ima xiqqoo qabduun alatti namni biraan akka hin jirre barreerra. Kanaan alatti, qaamolee poolisiitu jira. Kanaaf, maddeen gara garaarraa hubanne,” jedhan.
Itti dabaluun Obbo Daawudiin yeroo ammaa karaa bilbilaas ta’e karaa kamiinuu argachuun akka hin danda’amne himan.
Obbo Fissahaan qaamolee nageenyaa mootummaa argachuuf yaalleerra jedhanii rakkoo kan tahe garuu ”adeemsa baratameen bilbila hin kaasan. Ergaa gabaabaatiinis deebii hin laatan. Keessumaa Ministeera Nagaa fi Poolisii Federaalaa dubbisuuf yaalleerra garuu rakkoo bilbila kaasuu dhabuutu jira,” jedhan.
Amnastii Intarnaashinaal ergaa Ministeera Nagaaf barreesseen Daawud Ibsaa mirga bilisaan socho’uu fi yaada isaa bilisaan ibsachuu mulqamuu ibseera.
Kana malees, ilaalcha siyaasaa isaafi mormii inni mootummaa irraa qabuun hidhamuu akka hin hafnes ibsa kana keessatti eerameera.
Mootummaan dhimma mana keessatti hidhamuu Obbo Daawud Ibsaa ilaalchisee amma dura waan jedhe hin qabu.
Obbo Fissahaan namootni siyaasaa biroo hedduun hidhamanii akka jiran quba qabaachuu kaasuun, qondaalotni ABO warri akka Lammii Beenyaa fi Daawwit Abdataa erga manni murtii isaan gadhiisee booda hidhamuu isaanis ibseera.
Namoonni siyaasaa hidhaa jiran hidhamtoota siyaasaati jechuuf adeemsa murtii eeguufi ragaawwan jiran qorachuu akka barbaachisu Obbo Fissahaan himaniiru.
ABOn hoggantoonni koo hedduun na jalaa hidhamaniiru jechuun dursee ture filannoo bara kana Itoophiyaan gaggeesitu keessaa bahuu isaa kan ibse.
2 thoughts on “HD ABO OBBO DAWUD IBSA HIDHAA MANAA IRRAA AKKA GADILAKKIFAMAN AMNESTY’n GAAFATE”
kaayyoon mootummaan kun Ilmaan Oromoo fi ABO dararuuf beekamaa dha .Faayidaa Siyaasa dhabna yoo ABO Filannoof dhiyaate.Kana Boda ABO’n Tooftaa cimaan Oromoo irra deebiin Gurmeessuu qaba.Namni keena faayidaa xiqqoon amma yoomitti of-gurguraa?
I support the Idea jaal dawid been a free man